I-Vimalakirti Sutra - Inkcazo emfutshane
I-Dharma-Door of Nondality
I-Vimalakirti Nirdesa Sutra, ebizwa ngokuba yiVimalakirti Sutra, mhlawumbi yabhalwa malunga neminyaka engama-2 000 edlulileyo. Sekunjalo kugcinwa ukutsha nokuhlaziya kunye nobulumko bayo. Abafundi banamhlanje baxabisa isifundo salo ngokulingana kwabasetyhini kunye nokukhanyiswa kwabantu.
Njengamanye amaninzi amaMahayana Buddhist Sutras, imvelaphi yombhalo ayengaziwa. Ngokuqhelekileyo kukholelwa ukuba inqobo yayiyintando yesandisi yamaSanskrit malunga nekhulu le-1 CE.
Inguqu enkulu kunazo zonke ezisinda kuloo mini yinguqulelo kwisiTshayina esenziwe ngu-Kumarajiva ngo-406 CE. Olunye uguqulelo lwesiTshayina, olubhekwa njengoluchanekileyo, lwagqitywa nguHsuan Tsang kwikhulu le-7. Isiqalo sesiSanskrit esele silahleke ngoku sasiguqulelwa kwisiTibetan, esona sikhulu sakwa-Chos-nyid-tshul-khrims kwikhulu le-9.
I-Vimalakirti Sutra iqulethe ubulumko obungabonakaliyo kunokuba ingabonakaliswa kwisicatshulwa esifutshane, kodwa nantsi ingcaciso emfutshane ye-sutra.
Kulo msebenzi wezobuxoki, uVimalakirti ngumntu ohlala ephikisana nabafundi bakhe kunye ne-bodhisattvas kwaye ubonisa ukukhanya kwakhe okunzulu nokuqonda. NguBuddha kuphela olingana naye. Ngoko, iphuzu lokuqala elenziwe kwi-sutra kukuba ukukhanya akuxhomekeke kulungelelaniso.
I-Vimalakirti yi-Licchavi, enye yezindlu ezilawulayo zaseIndiya zasendulo, kwaye ibanjwe ngokuhlonishwa okukhulu ngabo bonke. Isahluko sesibini se-sutra sichaza ukuba iVimalakirti ibonisa ukugula (okanye igulela kuye) ukwenzela ukuba abantu abaninzi, bevela kukumkani ukuya kwidolophu, beza kumbona.
Uyashumayela i- dharma kulabo abaza, kwaye abaninzi beendwendwe zakhe bayazibonela ukukhanya.
Kwizahluko ezilandelayo, sifumana uBuddha etshela abafundi bakhe , kunye ne- bodhisattvas kunye noothixo abahamba phambili, ukuya kuVimalakirti. Kodwa bayanqikaza ukuya kwaye baxolise kuba ngaphambili babesongelwa yi-Vimalakirti yokuqonda okukhulu.
Nokuba uManjusri , bodhisattva wobulumko, uziva ethotywa yiVimalakirti. Kodwa uyavuma ukutyelela umnqweno. Emva koko umkhosi omkhulu wabafundi, ama-buddha, i-bodhisattvas, oothixo kunye noothixokazi banqume ukuhamba kunye nokufaka ubungqina kuba ingxoxo phakathi kweVimalakirti kunye noManjusri yayiza kukhanya ngokukhawuleza.
Kwimbali elandelayo, igumbi lokugula likaVimalakirti liye landa ukuba lithathwe kwizinto ezingenakubalwa ezazize ziza kumbona, zibonisa ukuba zingene kwindawo engenammiselo yokukhululwa okungenakwenzeka. Nangona bebengenakucinga ukuthetha, iVimalakirti idonsa abafundi bakaBuddha kunye nezinye iindwendwe kwiingxoxo apho iVimalakirti ijongene nayo ingqiqo yabo kwaye ibanikeze imfundo.
Okwangoku, uBuddha ufundisa engadini. Umyezo uyanda, kwaye u-Vimalakirti uvela kwiindawo zakhe zokundwendwela. UBuddha ungeze amagama akhe okufundisa. I-sutra iphetha ngombono kaBuddha Akshobhya kunye ne- Abhirati ne-Universegue ebandakanya iinguqulelo ezine .
Ukuba kwakufuneka uphononise imfundiso esemqoka yeVimalakirti ngelizwi elilodwa, eli gama lingaba "luthando." Ubunqwenela imfundiso enzulu kakhulu kubaluleke kakhulu kuMahayana Buddhism.
Kwona nto isisiseko, ibhekisela ekuboneni ngaphandle kokubhekiselele kwisifundo nento, ngokwazo kunye nezinye.
Isahluko 9 seVimalakirti, "iDharma-Door of Uncleality", mhlawumbi isahluko esaziwayo kakhulu sutra. Kule sahluko, iVimalakirti inomngeni iqela le-bodhisattvas elidlulileyo ukuchaza indlela yokungena kwi-dharma-door. Omnye emva komnye, banikela imizekelo yobuninzi kunye nondualism. Umzekelo (ukusuka kwiphepha 74, inguqulelo kaRobert Thurman):
I-bodhisattva i-Parigudha yathi, "'Ukuzimela' kunye 'nokungabi nantoni' kuyinyanzelo.Ukuba ubukho bobuqu bungeke buqondwe, yintoni emele yenziwe 'ingenanto'? . "
I-bodhisattva Vidyuddeva ivakalise ukuba, "'Ulwazi kunye nokungazi' ziyinyaniso. Iimpawu zokungazi kunye nolwazi ziyafana, ngenxa yokungakwazi ukungazi kakuhle, ukungaqondakali, nokugqithiseleyo kwinqanaba leengcamango. "U
Ngomnye emva komnye, i-bodhisattvas ifuna ukuphuma ngaphandle kokuqonda kwabo ubunqweno. UManjusri uxela ukuba bonke bathethe kakuhle, kodwa nemimiselo yabo yobunqunu ihlala i-dualistic. Emva koko uManjusri ubuza iVimalakirti ukuba inikeze imfundiso yakhe emnyango wokuziphatha.
U-Sariputra uhlala ethule, kwaye uManjusri uthi, "Mhle kakhulu! Mhle kakhulu, nkosikazi!" Ngokwenene, akukho nto yokungena kwiimpawu zelwimi, izandi, kunye neengcamango.
Kwinqanaba elityebileyo kwiSahluko 7, umfundi uSariputra ucela unkulunkulukazi okhanyiselweyo ukuba kutheni engaguquki kwilizwe lakhe labesifazane. Oku kungabhekisela kwinkolelo efanayo yokuba abafazi kufuneka baguquke babe ngabayeni ngaphambi kokuba bangene eNirvana .
Uthikazikazi uyaphendula ukuba "ilizwe labesetyhini" alikho ubukho obuphilayo. Emva koko udala uSariputra ukuba athabathe umzimba wakhe, ngoxa yena esithatha. Ingumfanekiso ofana noguqulo lwezesini kwi- Orlando inoveli yaseOrlando Woolf kodwa ibhaliwe phantse amabini amabini ngaphambili.
Uthikazikazi ucelomngeni uSariputra ukuba aguqule ukusuka kumzimba wakhe wesifazana, kwaye uSariputra uyaphendula ukuba akukho nto yokuguqula. Uthikazikazi uyaphendula, "Ngaloo nto engqondweni, uBuddha wathi, 'Kuzo zonke izinto, akukho ndoda okanye isetyhini.'"
Translations i siNgesi
URobert Thurman, Imfundiso Engcwele yeVimalakirti: I-Mahayana Scripture (iPennsylvania State University Press, 1976). Le nguqulelo efundeka kakhulu kwiTibetan.
UBurton Watson, iVimalakirti Sutra (Columbia University Press, 2000).
UWatson ungomnye wabaguquleli abahloniphekileyo bamavesi eBuddhist. I-Vimalakirti yakhe iguqulelwe ukusuka kwi-Kumarajiva isiTshayina.
Funda Okunye: Ubume bemiqulu yeBuddhist
Yintoni uBuddha Azange Athi Ngayo NgoThixo
Indawo engcwele yeTabernakele
Unqulo lweZikolo zeNkolelo
Indlela yokufunda i-Piano Music
Ukuvumela abaFundi beeNdlu ukuba bathathe iSuku saBafundi babo
Imbali yokuThuthukiswa noBugcisa
Ama-Ottoman Sultans ayengekho kakhulu eTurkey
Ubudlelwane phakathi kweeRhafu zoTshintsho lweeNkcitho kunye nexabiso leMpahla
Indlela yokudibanisa "iBluchir" (ukuya eBleach)
I-University of Rockhurst Admissions
Iimagazini eziphezulu zeeYoungsters
Ukukhanya kwe-Ice Sphere Tutorial